အာမခံမပါပဲမွေးဖွားခြင်းကိုအခမဲ့ရနိုင်မလား။ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ သတင်း၊ ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုန်ပစ္စည်း နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ ဖျော်ဖြေရေး ပြင်းထန်သောအားကစား
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> အခမဲ့အာမခံကိုရရှိနိုင်ပုံ (အာမခံချက်မရှိဘဲ)
သင်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဖူးပြီးပြီ၊ သင့်မှာဆေးညွှန်းပါပေမယ့်သင့်မှာပိုက်ဆံမရှိဘူး။ ဒါဟာတစ်ချိန်ချိန်ကံမကောင်းအတွေ့အကြုံအများအပြားလိမ့်မည်အများအပြား - လွန်း - ဘုံဇာတ်လမ်းပါပဲ။ သငျသညျလစဉ်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆေးညွှန်းဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါကယခုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မသေချာမရေရာ 12 ကိုမြှောက်။
အမျိုးသမီး ၆၂ ရာနှုန်းသည်လက်ရှိတွင်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်သည် အချို့သောအမျိုးအစားများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုဌာန (DHHS) ကဆိုသည်။ သို့သော်အာမခံမရှိလျှင် သူတို့အားအမျိုးသမီးလေးပုံသုံးပုံ Guttmacher Institute မှတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းစျေးနှုန်းသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ ထက်ကျော်လွန်ပါကမွေးဖွားမှုနှုန်းကိုမတတ်နိုင်ပါ။ ခုနစ်ယောက်လျှင်တစ် ဦး သည်မည်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်မဆိုကလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုမတတ်နိုင်ပါ။ စျေးနှုန်းချိုသာသောကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်များစွာသောမိန်းမများအတွက်အမှန်တကယ်တွင်အခမဲ့မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးလိုအပ်သောကလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုအာမခံမပေးဘဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ပင်ရနိုင်သည်။
ရဲ့အခြေခံနှင့်အတူစတင်ကြပါစို့။ အာမခံမရှိပါကမွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆေးညွှန်းပါသောမည်သူမဆိုသည်ဆေးဆိုင်တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ ဆရာဝန်ကိုပုံမှန်မတွေ့ရသောလူနာများသည်မိသားစုစီမံကိန်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ် X ဆေးခန်းတွင်ရက်ချိန်းယူနိုင်သည်။
ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းအများစုအတွက်ဆရာဝန်၏သွားလည်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည် ဆရာဝန်တစ် ဦး သည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ညွှန်ကြားသည်။ ဆရာ ၀ န်သည်လူနာ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းအပါအ ၀ င်မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုမေးမြန်းပြီးအရေးကြီးသောလက္ခဏာအနည်းငယ်ယူလိမ့်မည်။ လူနာသည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသမိုင်းကဲ့သို့သောစွန့်စားရသည့်အချက်တစ်ချက်သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကပါကစမ်းသပ်မှုများသည်မလိုအပ်ပါ။
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်မွေးကင်းစကလေးငယ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများဖြစ်သော IUDs, မြှေးများသို့မဟုတ် implants များအနေဖြင့် pap smear, pelvic exam သို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာစသည့်အပိုဆောင်းအလုပ်များကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အပိုဆောင်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလည်းလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိုကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ဒုံး၊ သုက်ပိုးများနှင့်နံနက်တိုင်းဆေးသောက်ခြင်းစသောဆေးများကိုအတန်အသင့်စစ်ဆေးခြင်းသည်ဆေးဆိုင်သို့အမြန်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။ မိသားစုစီမံကိန်းနှင့် STI ဆေးခန်းများသည်ကွန်ဒုံးနှင့် spermicide ကိုအခမဲ့ပေးလိမ့်မည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာအထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်ဤမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
implants နှင့် IUDs ကဲ့သို့သောပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရေရှည်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်းများအားကျန်းမာရေးရုံးမှကျန်းမာရေးရုံးမှဆေးခန်းတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းရမည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်စာမလုပ်လျှင်, ရိုးရှင်းသောအဖြေကိုအလွန်အကျွံဖြစ်ပါတယ်။ မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ဆွဲခြင်းသည်ခက်ခဲသည်။ စျေးနှုန်းများတစ်နေရာတည်း၌ရှိကြ၏။ သင့်တွင်အာမခံရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ တတ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်မှာအနည်းငယ်သောဗဟုသုတလိုအပ်သည်။
သန္ဓေတားခြင်းရွေးစရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည်ကုန်ကျစရိတ်၊ တန်ဖိုး၊ ထိရောက်မှုနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကွဲပြားသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံး၏ကွန်ဒုံးသည်ဒေါ်လာ ၁ မှ ၂ ဒေါ်လာအထိကျသင့်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုတစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးပြား တစ်လလျှင် ၈ ဒေါ်လာလောက်သာကုန်ကျနိုင်သည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်လစဉ်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ diaphragms, vaginal rings, IUDs, implants, and hormone shots စတဲ့ရေရှည်မွေးဖွားနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ကနေ ၁,၅၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်တယ်။
ဆရာဝန်၏လည်ပတ်မှုများသည်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ထံမှဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ထား $ 20 မှ $ 200 သင့်တွင်အာမခံမရှိပါကအလည်အပတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ၊ 340B ပံ့ပိုးသူများနှင့်ခေါင်းစဉ် X ဆေးခန်းများသည် ၀ င်ငွေပေါ် မူတည်၍ လူနာကိုဒေါ်လာ ၀ နည်း၍ အားသွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်အများအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၀ သို့မဟုတ် ၂၅ ဒေါ်လာခန့်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်ကဲ့သို့သောအထူးကုတစ် ဦး သည်တစ်ခေါက်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၂၅ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော IUDs, မြှေးသို့မဟုတ် implants အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသော devices များအတွက်, သင်အပိုဆောင်းစာမေးပွဲများနှင့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပိုမိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသန္ဓေတားဆေးနည်းစနစ်များသည်နောက်ဆက်တွဲထပ်မံလည်ပတ်မှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးစေသည့်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုအပ်နိုင်သည်။
အမျိုးသားကွန်ဒုံး၊ spermicide နှင့်အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းကဲ့သို့သောကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်းများကိုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်တွေ့ရန်ငွေမပေးဘဲ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်ကြိမ်သာသန္ဓေတားဆေးများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ် ၀ ယ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးလာနိုင်သည်။ IUDs, diaphragms နှင့် birth control shots စသည့်ရေရှည်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကာလတိုနည်းလမ်းများထက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အများအားဖြင့်ယောက်ျား၏ကွန်ဒုံးကိုမွေးဖွားမှုနှုန်းအနိမ့်ဆုံးပုံစံဖြင့်သုံးစွဲရန် ၁ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ အဘယ်သူမျှမဆရာဝန်၏ခရီးစဉ်ကိုမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၃၀၀ အထိတိုးနိုင်သည်။ ပို၍ စျေးကြီး။ ရေရှည်သန္ဓေတားခြင်းသည်တူညီသောနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနိုင်သည်။ နှစ်နှစ်မြှေးသည်ဆရာဝန်၏လည်ပတ်မှုများအပါအဝင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကုန်ကျနိုင်သည်။ ဆရာဝန်၏လည်ပတ်မှုများအပါအဝင် ၁၂ နှစ် IUD ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ကုန်ကျနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရေရှည်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ဆရာ ၀ န်ထံလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်စက်ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည် အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆေးခန်းတစ်ခုတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းသို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ရန်နီးကပ်သောအရာတစ်ခုခု ဝင်ငွေအရည်အချင်းပြည့်မီသူလူနာသည်။
အာမခံနှင့်အတူလူများကံ၌ရှိကြ၏။ အာမခံနှင့်အတူ, မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဘာမျှကုန်ကျသည်။ ဒါအမှန်ပဲ။ အိုဘားမားအစိုးရ၏တတ်နိုင်သောစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေ (ACA) အားလုံးကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များကိုကြောင်းပြဌာန်းထားသည် ခွဲစိတ်မှုအပါအဝင်အမျိုးသမီးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။ ဆရာ ၀ န်၏လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းအတွက်ငွေကိုမယူပါနှင့်။ အာမခံသည်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းတိုင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်ယောက်ျား၏ကွန်ဒုံးမှအပမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားအားလုံးတွင်အနည်းဆုံးရွေးစရာတစ်ခုရှိသည်။
အမျိုးအစား ဆေးညွှန်းလိုပါသလား? လူကြိုက်များသောအမှတ်တံဆိပ် ထိရောက်မှု ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် * SingleCare ကူပွန်နှင့်အတူပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးပြား ဟုတ်တယ် Ortho Tri-Cyclen Lo (ပေါင်းစပ်ဆေးပြား)
Errin (ပရိုဂျက်စတင်းသာဆေးများ) 93% -99% ဒေါ်လာ ၅၀ $ 9- $ 13
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေး (ဆေးပြားများပြီးနောက်နံနက်) မဟုတ်ဘူး Plan B တစ်အဆင့် ကခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါပေါ်မူတည်။ 89% -95% $ 11- $ 50 $ 10
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးရိုက်ချက်များ ဟုတ်တယ် Depot စစ်ဆေးခြင်း 94% $ 150 ဒေါ်လာ ၂၀
implants ဟုတ်တယ် Nexplanon > 99% $ 1,300 $ 967
transdermal patch ကို ဟုတ်တယ် Xulane ၉၁% $ 0- $ 150 $ 85
IUDs ဟုတ်တယ် Kyleena > 99% $ 1,300 $ 987
လိင်အင်္ဂါကွင်း ဟုတ်တယ် မင်္ဂလာပါ ( ဒါဟာရေတွက် FDA မှအတည်ပြုထားသောအခြားကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်ကွင်းဖြစ်သည်။ ၉၁% $ 0- $ 200 $ 165
အမြှေးများ (spermicide နှင့်အတူ) ဟုတ်တယ် Caya 92% -96% $ 0- $ 250 ဒေါ်လာ ၇၉
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဦး ထုပ် ဟုတ်တယ် Femcap 71% -86% ဒေါ်လာ ၉၀ $ 78
အမျိုးသမီးကွန်ဒုံး မဟုတ်ဘူး FC2 (FDA မှအတည်ပြုထားသောတစ်ခုတည်းသောကွန်ဒုံး) 79% -85% $ 2- $3သေတ္တာနှုန်း $ 187
အမျိုးသားကွန်ဒုံးများ မဟုတ်ဘူး Durex 83% -95% $2သေတ္တာနှုန်း $ 9
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုရေမြှုပ် မဟုတ်ဘူး ဒီနေ့ 76% -88% ဒေါ်လာ ၁၅ နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်သင်၏ SingleCare ကဒ်ကိုစကင်ဖတ်ပါ
* စီစဉ်ထားသောမိဘများအနေဖြင့်ဆရာဝန်၏လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့မပါ ၀ င်နိုင်သောကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအရသိရသည်။
အထူးလျှော့စျေးသို့မဟုတ်အခမဲ့မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုရရန်နည်းလမ်း ၉ ခုရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာအာမခံနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲလူနာသူတို့ရဲ့ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားလုံးကိုများအတွက် SingleCare ကိုအားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤကူပွန်များသည်အခမဲ့၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ SingleCare ကူပွန် သတ်မှတ်ထားသောမွေးဖွားမှုနှုန်းကို ၈၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းအများစုတွင်ယေဘူယျနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ရွေးချယ်မှုများရှိသည်။ ဆေးအများစုကဲ့သို့ပင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ယေဘူယျပုံစံများထက် ပို၍ ကုန်ကျနိုင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်အစားယေဘုယျအားဖြင့်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်မလားဆရာဝန်ကိုအမြဲမေးပါ။
3. ရက်ပေါင်း 90 ထောက်ပံ့ရေးတောင်းခံပါ
အမြောက်အများဝယ်ယူခြင်းသည်ဆေးဆိုင်ဖောက်သည်များအားရေရှည်တွင်ငွေအမြောက်အမြားသက်သာစေသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သော်လည်းသေးငယ်သည့်ဆေးညွှန်းကိုမကြာခဏဖြည့်ရန်အတွက်အကြွေမျိုးစုံကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်သက်သာစေလိမ့်မည်။
ဈေးအပေါဆုံးသောအာမခံအစီအစဉ်ပင်လျှင်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၀ ဒေါ်လာအထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဆရာ ၀ န်၏လည်ပတ်မှုနှင့်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်သည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံစူးစမ်းလေ့လာသင့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဝင်ငွေပေါ် မူတည်၍ သင်ပေးဆောင်သည့်ပရီမီယံများသည်အခွန်ငွေအဖြစ်သင့်အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပြန်အမ်းမည်။ အခကြေးငွေမပါသည့်အခမဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုသည်မှာအခမဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၀ င်ငွေနည်းသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများရှိသောမိသားစုများအတွက် Medicaid ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်များကိုရနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသန္ဓေတားဆေးတွင်အခမဲ့သန္ဓေတားခြင်းပါဝင်သည်။
၆ ။340B ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများ
340B ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများနှင့်အခြားလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားများအပါအ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သင့်ဝင်ငွေပေါ်မူတည် ဤဆေးခန်းများသည်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဆေးများ၊ ရိုက်ချက်များနှင့် implants များကိုအခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာစွာပေးလိမ့်မည်။
စီစဉ်ထားသည့်မိဘများဆေးခန်းများသည် Medicaid နှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်အများစုကိုလက်ခံသည်။ တစ်ခုခုမရှိသောလူနာများအတွက်ဤဆေးခန်းများသည် ၀ င်ငွေပေါ် မူတည်၍ မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုအထူးလျှော့စျေးပေးလေ့ရှိသည်။
သင့်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနများသို့မဟုတ်လျှော့ချထားသောသို့မဟုတ်အခမဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးသောမိသားစုစီမံကိန်းဆေးခန်းများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၅ (သို့) ထိုထက်နည်းသောသာမန်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သင့်အားဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကသင့်အားတွေ့မြင်နိုင်ပြီးသင့်လျော်သောမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းကိုညွှန်ကြားထားသည်။
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး၊ လိင်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ် STIs (လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ) နှင့်ခေါင်းစဉ် X ဆေးခန်းများကိုအာရုံစိုက်သည့်ဆေးခန်းများသည်လျှော့စျေးသို့မဟုတ်အခမဲ့မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုကိုရှာဖွေရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနေရာများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီများနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ဆေးဝါးနှင့်ကိရိယာများကိုလိုအပ်သည့်မသန်စွမ်းသောလူနာများကိုအခမဲ့ပေးသည်။ အချို့ကအာမခံထားသောလူနာများအတွက်ပေးချေမှုတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဤလူနာများအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်သည်များသောအားဖြင့်လူနာများအားစျေးကြီး။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အတွက်လူနာ၏အကူအညီသည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောယေဘူယျအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း (သို့) ကုန်ကျစရိတ်မရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သန္ဓေတားဆေးအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အသုံးပြုမှုပုံစံများပြောင်းလဲခြင်း , CDC
ကျား၊ မရေးရာအားဖြင့်သန္ဓေတားဆေးနှင့်မူဝါဒ , PerryUndem
Contraceptive နည်းလမ်းများမစတင်မီလိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများနှင့်စစ်ဆေးမှုများ , CDC
ခေါင်းစဉ် X မိသားစုစီမံကိန်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ 2018 အကျဉ်းချုပ် ပြည်သူ့ရေးရာရုံး
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများ , HealthCare.gov
340B နှင့် Medicaid - မိသားစုစီမံကိန်းပံ့ပိုးသူများအတွက်ရှင်းပြချက် , အမျိုးသားမိသားစုစီမံကိန်းနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအသင်း
မစစ်ရသေးသော apple cider ရှလကာရည်၏အကျိုးကျေးဇူးများ